Mpisolovava ho maimaim-Poana toro-hevitra maimaim-poana avy amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo ny mpisolovava an-tserasera
Mpisolovava ho maimaim-Poana toro-hevitra maimaim-poana avy amin’ny mpilatsaka an-tsitrapo ny mpisolovava an-tserasera
Androany aho dia nahazo ity mailaka, hamaky izany ary handroso amin’ny alalan’ny mailaka ho ataoko ho toy ny olona maro araka izay azo atao, hanova izao tontolo izao, mitondra ny mazava, ianao dia afaka. Ny fiantsoana ny amin’ny fanampiana ny italiana ny olona any amin’ny firenena eoropeana sy ny Amerika, azafady, Merkel, Sarkozy, Obama sy ny fianakaviany, izahay no manao izany mba handoa ny fitopololahy ny hetra eo amin’ny lalàna. telo-polo roa-polo roa ambin’ny folo — ny raharaha Federfarma sy ny fahasalamana:»ny hiena»henatra Iorio afaka mamonjy lavitrisa euros isan-taona ao Italia tsotra amin’ny milina validatrici isaky ny levitra ka ny fanafody dia mety ho io ihany no nampidirinay ny fahasalamana karatra. Ireo fitaovana ireo dia azo atao mba hisorohana ny fisolokiana levitra tsy scruples, dokotera afa-po fa ny fomba fanamboarana ny fanafody diso ny lalàna. Dia lasa fotsiny amin’ny valo ora maraina, in bologna, raha ny lehilahy iray ny taona, ny bricklayer, ny fiara, ny fiat punto nijanona teo anoloan’ny foiben’ny ny fidiram-bola fahafahana misafidy izany, dia manome ny afo. Tao amin’ny hopitaly, hiaina ao anatin’ny toe-javatra tena lehibe, niaraka tamin’ny mirehitra rehetra manerana ny vatana.
Zava-dehibe: raha toa isika ka nanomboka ho maro izy ireo mba hangataka fanampiana amin’ny fitsarana eoropeana momba ny zon’olombelona ela na ho haingana dia nisy olona tokony ho menatra ny fomba isika, dia tsaboina amin’ny fanjakana italiana sy ny mpanan-karena mpanapaka fa sguinzagliano italiana fidiram-bola sampan-draharaha sy ny Equitalia-hanimba antsika ary hitondra antsika ho toy ny mpanao heloka bevava.
Izy ireo dia ny heloka bevava ny lalàna
Dia niakatra ho any amin’ny birao mba hampiseho ny tsy fisian’ny varotra ara-barotra invoiced, fa raha ny fandaniana tsy tapaka ny tahirin-kevitra amin’ny ny faktiora, ny mpandoa hetra rehefa mba mampiseho fa, manoloana ny ambony kokoa ny vola miditra aoka ho azo antoka, efa nanameloka sy ny vola lany raiki-tampisaka ao ny raharaha nentina teo, ny fitsarana misy
Mpisolovava indexes vao hahalala izay tratran'ny hetra